Safal Khabar - ज्वरोका बिरामी बढेपछि भरतपुर अस्पतालमा ज्वरो क्लिनिक शुरु
मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६, १४ : ११
चितवन । भरतपुर अस्पतालमा ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढेपछि आजबाट ज्वरो क्लिनिक शुरु गरिएको छ । तीनवटा क्लिनिकबाट ज्वरोका बिरामीको परीक्षण थालिएको हो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या अत्याधिक बढेपछि नियमित बहिरङ्ग सेवाले धान्न कठिन भएकाले सो क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उहाँका अनुसार एकै दिन बहिरङ्ग सेवामा नयाँ एक हजार ९२२ जनासम्म बिरामीले टिकट काटेका थिए । तीमध्ये नौ सय भन्दा बढी ज्वरोका रहेका थिए ।
यससँगै पुराना ज्वरोका तीन सयसम्म बिरामी पुनः परीक्षणका लागि आएकाले अस्पतालले नयाँ विकल्पको खोजी गरी बिरामीलाई सेवा दिन शुरु गरेको पौडेलले जनाकारी दिनुभयो ।
अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा प्रकाश खतिवडाका अनुसार क्लिनिकमा विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् । अहिले ज्वरोका बिरामीमा डेङ्गु र ईन्फुलुएन्जा देखिएको छ । क्लिनिकमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले डेङ्गु देखिएमा तत्काल रगतको परीक्षण र ईन्फुलुएन्जा देखिएमा थुकको परीक्षण गरी उपचार गर्न शुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सोमबार साँझसम्म तीन हजार ९९५ जनाको रगतको नमूना परीक्षण गर्दा एक हजार ३१६ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयका किट नियन्त्रक राम केसीले जानकारी दिनुभयो । डेङ्गुकै कारण जिल्लामा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
१. माडीका वडाध्यक्षले तोडे अनसन
२. १९ तोला सुनसहित दुई जना पक्राउ
३. महात्मा गान्धीको दृष्टिकोणमा अमेरिका उभिन्छ : ट्रम्प
४. ‘दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस फैलियो, उद्धारको तयारी के छ’
५. ताजमहल अगाडि उभिएर यसरी फोटो खिचाए ट्रम्प दम्पतीले
६. स्नातक तहपछि छोराछोरी पढाउन खर्च गर्दिन : मन्त्री पुन
७. नागरिकता कानुनको विषयलाई लिएर दिल्लीमा दंगा : एक प्रहरीसहित सात जनाको मृत्यु
८. बजारमा छ्याप्छ्याप्ती ग्यासका अवैध सिलिन्डर
९. कोरोना भाइरस भएका देशबाट नेपाल आउनेहरुको निगरानी गर्न आग्रह